Ibudata ma wụnye Android 5.1 na ngwaọrụ Nexus gị Gam akporosis
Android 5.1 dị, budata ma wụnye ya na ngwaọrụ Nexus gị
gam akporo 5.1 Emere ya dịịrị ndị niile nwere ngwaọrụ Nexus mgbe ụnyaahụ gasịrị, Google kwupụtara ọkwa ya site na blog nke ya. Ntughari ohuru nke na-abia na otutu onu ogugu na ụfọdụ ozi maka ihe Nexus 5 na Nexus 6 na ihe ojoo maka ihe ndi ozo nke Nexus, nke anyi nwere ike igosi uzo ngwa ngwa na njikọ dika Wi-Fi. Fi si ngwa ngwa ohere nke ngosi ngosi.
Nexus ngwaọrụ na-ama nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe oyiyi nke Android 5.1 Lollipop ndị kasị ochie, a ozi ọma ga-amasị ndị nwere Nexus mbụ dị ka Nexus 7 2012, Nexus 10 ma ọ bụ ọbụna Nexus 5. Mgbe ahụ, anyị na-egosikwa gị otu esi gbanye onyonyo ụlọ ọrụ mmepụta ihe ka ị nwee ọhụụ gam akporo 5.1 Lollipop ọhụrụ na Nexus gị n'oge na-adịghị anya.
1 A gam akporo 5.1 Lollipop Factory Pictures
2 Esi wụnye ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke gam akporo 5.1
2.1 Ihe choro
2.2 Kpọghe bootloader
2.3 Wụnye gam akporo 5.1 Lollipop
A gam akporo 5.1 Lollipop Factory Pictures
Android 5.1 Lollipop mbipute LMY47D dị maka Nexus 5, Nexus 7 2012 na Nexus 10. Nke a bụ ndepụta anyị ga-emelite Dika ihe onyonyo ulo oru ndi ozo na-efu efu, dika nke ohuru na Nexus 6 ohuru na Nexus 9.
Buru n'uche na iji gbaa ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọkụ ịkwesịrị ka ekpochi bootloader.
Esi wụnye ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke gam akporo 5.1
Budata ụlọ ọrụ mmepụta ihe kwesịrị ekwesị maka ngwaọrụ gị, na nke a, a na-akpọ ya LMY47D
Budata Nexus USB ọkwọ ụgbọala
Dị ka m kwuru n'elu ị chọrọ mepee bootloader
Kọmputa na ADB arụnyere
Mee ọ rụọ ọrụ "USB debugging" na Ntọala> Onye Mmepụta nhọrọ. Iji nwee ike ịnweta nhọrọ ndị nrụpụta ị ga-aga Ntọala> Banyere wee pịa ugboro 7 na ọnụ ọgụgụ ụlọ ahụ.
Ọ bụrụ na maka ihe ọ bụla kpatara ngwaọrụ ahụ amataghị Ga-aga na nchekwa, pịa akara ngosi na akara atọ kwụ ọtọ ma họrọ njikọ USB na kọmputa. Gbanyụọ MTP ma họrọ PTP.
Nke mbu bu wụnye ADB site na nke a njikọ
Ọ na-emepe CMD site na ebe a: C: \_ android-sdk \_ platform-tools. Pịa mkpụrụedemede ukwu ma pịa n'otu ohere dị na folda ikpo okwu. Nhọrọ "windo windo mepee ebe a" na-egosi na menu mmapụta
Ngwaọrụ kwụsịrị kpamkpam ma jikọọ na PC site na USB
Site na windo iwu dee "ADB Ngwaọrụ" na enweghi edemede. Ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ ejikọrọ ga-egosipụta. Ọ bụrụ na ọ bụghị, họrọ PTP na njikọ USB na kọmpụta ahụ ka ọ jikọghachi ya ma chọpụta na awụnyere ndị ọkwọ USB Nexus
Ngwaọrụ reboots wee banye bootloader mode
fastboot oem Ị kpọghee ekwt
Soro ntuziaka onscreen
N'ihi na Mac:
Ẹkedori ọnụ na pịnyere iwu hazi ADB na Fastboot:
Nyagharịa na usoro mmasị> keyboard - ụzọ mkpirisi, mgbe ahụ ọrụ. Chọta nhọrọ nke ọnụ ọhụrụ na folda ma rụọ ọrụ ya.
Jikọọ Nexus ngwaọrụ gị Mac via USB
Wepu ọdịnaya nke ihe oyiyi ahụ na folda na desktọọpụ. Pịa aka nri na folda ahụ wee họrọ ọrụ mgbe menu gosipụtara, pịa akara ọhụrụ na folda ahụ
Next ụdị ke ọnụ window reboot ngwaọrụ na bootloader mode:
N'okpuru maka akpọchi:
Soro ntuziaka onscreen nke ngwaọrụ ahụ
Wụnye gam akporo 5.1 Lollipop
Site n'ime usoro ndị a anyị ga-ehichapụ niile ebe nchekwa dị n'ime mgbe ị na-etinyeghachi ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
A na-amịpụta ọdịnaya onyonyo ụlọ ọrụ site na otu ADB platform-tools folder site na nke anyi mepere windo iwu
Si na otu folda ahụ windo iwu ga-emepe ọzọ na usoro dị n'elu (ngbanwe + pịa aka nri) ma ọ bụ ọnụ na Mac
Dee iwu ahụ:
Anyị mere a mkpochapu nhichapụ nke ebe nchekwa dị n'ime soro iwu ndị a:
Fastboot ihichapu buut
Fastboot ichicha cacheFastboot hichapụ mgbake
Wepụ ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa
ngwa ngwa hufu userdata
Imagelọ ọrụ oyiyi faịlụ arụnyere nke etinyeburu na folda ikpo okwu:
fastboot - w mmelite oyiyi-nakasi-lmy47dd.zip
Ndị ọrụ Mac na Linux kwesịrị pịa aka nri na folda ebe ihe nrụpụta ihe oyiyi dị, gaa na ọrụ wee pịa akara ọhụrụ na folda ahụ ma pịnye iwu na-esonụ:
Ugbu a ọ ga-ewe nkeji ole na ole ịmalite ma melite iji nweta Android 5.1 Lollipop na ngwaọrụ Nexus gị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Android 5.1 dị, budata ma wụnye ya na ngwaọrụ Nexus gị
Ndị nke Nexus 4 anyị nwere ike ichefu ịnata mmelite ndị ọzọ? O_o
Ọ ga-abata maka Nexus 4, chere ntakịrị! Emelitere m ndepụta ahụ iji zere ọgba aghara
N'ezie, ọ bụrụ na nexus 5 bụ nke ochie ... My 4 ga-abụrịrị ... Nexus IV (na ọnụọgụ ndị Rom)
Samsung Galaxy S6 na-akọwa otu esi agbanwe batrị na ntuziaka onye ọrụ ya